Mpanamboatra tavoahangy tavoahangy vita amin'ny vera, mpamatsy - China Glass Perfume tavoahangy tavoahangy
Tavoahangy misy menaka manitra tsotra 10ml 15ml miaraka amin'ny paompy famafazana volamena
Ity tavoahangy vera mazava 10ml 15ml ity dia tavoahangy fitaratra tsara tarehy. Manampy be dia be ny habaka honenana sy ny latabatra fisoloana akanjo na aiza na aiza! Raha manana fanontaniana manokana momba ny vokatray ianao dia mifandraisa azafady ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
30ML 50ML 100ML BOTOTRA REHETRA TSY MAINTSY REHETRA REHETRA AZO AMIN'NY SPRAYER MAFY
Cap volamena / volafotsy
Sprayer Mist tsara
Tavoahangy fitaratra matevina
Tavoahangy azo soloina menaka manitra
Tavoahangy manana kalitao avo lenta ho an'ny ranon-javatra mora fatra. Mora ny habeny, azo entina na aiza na aiza, tena mety amin'ny menaka manitra, menaka manitra ary menaka manitra. Manome fihenam-bidy.
1oz 30ml tavoahangy misy menaka manitra azo refillable, tavoahangy tavoahangy vita amin'ny menaka manitra vita amin'ny veromanitra vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny verinia
Refy: 4.5 x 2.3 x 9.3 cm / 1.8 x 0.9 x 3.7 santimetatra (halavany x sakany x haavony); fahafaha-manao: 30 ml / 1 grama
Portable sy refillable. Miaraka amin'ny famafazana volafotsy vy manjelanjelatra mamirapiratra ary fonosana mifanaraka aminy
Mpitifitra zavona tsara tarehy manitra ho an'ny ranomanitra, miaraka amin'ny famafazana zavona manify, famaohana zavona manify no misy
Izy io dia ampy hamafazana mivantana ny vavan'ny tavoahangy ho fenoina. Ny mololo plastika dia miitatra hatrany amin'ny farany ambanin'ny tavoahangy mba hahazoana antoka fa azo idirana ny entanao mandra-pahatongan'ilay rano mitete farany
100ml 3.4oz Vintage Style Clear Glass Tsy misy fangarony tavoahangy vita amin'ny menaka manitra miaraka amin'ny Airbag Atomizer Long Tassel
Tavoahangy fitaratra sy fonosana metaly miaraka amina milina fanenon-drivotra lava vita amin'ny tassel, famolavolana Retro ary endrika kanto
Sakany fampiharana: Menaka manitra, menaka fanosotra, menaka azo averina mamboatra ary azo ampiasaina indray ilay tavoahangy misy menaka manitra.
Azafady mba araho ny fandanjalanjana rehefa mameno na mampiasa menaka manitra tianao amin'ny tavoahangy refillable
Ny tavoahangy misy menaka manitra faran'izay tsara dia lava ny ranomanitrao. Ity no fanomezana tsara indrindra ho an'ny mpifankatia, ray aman-dreny ary namana
Azonao atao ny manaingo ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandriana, manampy haingon-trano sy latabatra kanto amin'ny latabatra fandroana sy fitafiana
Manome fanaingoana tavoahangy manitra avo lenta izahay, ao anatin'izany ny satrony sy ny tsifotra. Manome serivisy toa ny famafazana loko, fanontana ary fanaingoana sns izahay.
Fanontaniana tonga soa!
Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo,